Muuri News Network » DHAGAYSO: Raysul Wasaaraha Sweden Waxaan bixinayna sharci ku meel gaar ah laga bilaabo..
DHAGAYSO: Raysul Wasaaraha Sweden Waxaan bixinayna sharci ku meel gaar ah laga bilaabo..
Nov 26, 2015 - Comments off
Dawladda ayaa dhawaan shir saxaafadeed ku sheegtay in ay shuruudaha ku sii adkeeynayso qaxootiga waddanka yimaada, tusaalahan in kaadhka aqoonsiga ah dadkan laga dalbado marka ay soo raacayaan basaska amba tareemada Iswiidhan ku soo socda.
HALKAN RIIX OO KA DHAGEYSO
Sido kale in lacagta loo yareeyo dadkan markey Iswiidhan yimaadan, islamarkaas la gaabiyo wakhtiga ay dadkni qoysaskooda ku codsan karaan. Stefan Löfven oo shirkan saxaafadeed la qabtay Åsa Romson, raii´sal wassare ku xigeenka, ayaa halkan ka sheegay in caruurta waddanka sharciga ka codsata da´dooda si gaar ah loo baadhayo mustaqbalka.
Dawladda ayaa iyaduna go´aamisay in sharci meel ku gaadh ah la dhabeeynayo sannadka dambe. Qeynuunadan ayaa laga bilaabo 1 bisha april sannadka dambe shaqeeynaya. Sharciyada maanta la soo dejiyay ayaa meel ku gaadh ah. 2 ilaa 3 sanno ayuu sheegay Löfven.